एजेन्सी, वेद तथा धार्मिक ग्रन्थहरुमा महिलाका केही अंग पुरुषले छुन नहुने भन्ने उल्लेख रहेको छ । महिलाहरुको नाभीलाई धर्मशास्त्रमा पवित्र मानिएको छ । पुरुषहरुले महिलाको नाभी कहिल्यै छुन नहुने बताएको छ । नाभी पबित्र भएकोले माता काली विराजमान भइ बसेको हुँदा पुरुषहरुले नाभी छोएमा काली माता क्रोधित हुने धर्म शास्त्रमा विश्वास रहेको छ । काली […]
सामान्यतया महिला पुरुष प्रति र पुरुष महिला प्रति आकर्षित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । आज हामीले पुरुषको कुन अंग प्रति महिला अकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा चर्चा गरेका छौं । यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाले गरेको अध्ययन अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । त्यस्तै ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको […]
हरेक युवतीलाई बिवाहको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका कुरा मनमा खेल्छ । युवतीहरु बिवाहभन्दा पहिला आफ्नो पार्टनर र हनिमुनको बारेमा मात्र सोच्छन् भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यस्तो कदापी होइन । तनाव हुने कारण चाँडै त गरिरहेको छैन ? बिवाहभन्दा एकरात पहिला केटीहरु कतै आफूले बिवाहको लागि हतार त गरिन भनेर सोच्छन् । उनीहरुलाई बिवाहपछि जिम्मेवारी लिन […]
थाहा पाउनुहोस्, पुरुष र महिलालाई कुन समयमा यौन चाहना धेरै हुन्छ ?
महिलाले कण्डमको प्रयोग गर्न मन नपराउनु कारणहरु
सेक्सलाई रमाइलो बनाउन महिलाहरुलाई टिप्स
हाम्रो शरीरको लागि विभिन्न कुराहरु ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । किन की स्वस्थ जीवन जिउनको लागि हामीले सबैकुरालाई ध्यान दिन जरुरि छ । आफ्नो बुढीसँग सुत्दाको पनि फाइदाहरू छन् । तर आफ्नो पार्टनरसँग टाँसिएर सुत्दा पनि फाइदा हुने अनुसधानले जनाएको छ । फाइदाहरु बुढा, बुढी दुवै टाँसिएर सुत्दा मिठो र गहिरो निन्द्रा लाग्छ, जसले गर्दा हाम्रो […]
थाहा पाउनुहोस्, महिलाहरु सेक्स गर्नु अघि के चाहन्छन् ?
नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । जो मानिस नियमित सेक्स गर्छन उनीहरु कम विरामी हुन्छन् । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्स गर्दा मानिस शारीरिक रुपमा मात्रै नभई […]
कुन उमेरका महिलासँग यौनसम्पर्क गर्दा सबैभन्दा बढी यौन सन्तुष्टी पाउछ
प्राय कुन उमेरको यौन सम्बन्ध बढी रोमान्चक र आनन्ददायक भन्ने बिषयमा धेरै बहसहरु हुने गर्छन । सामान्यतया कुरकुरे बैँश अर्थात् किशोरावस्थाको समयमा मान्छे यौनका विषयमा सबैभन्दा धेरै उत्सुक हुन्छ र त्यस्तो कौतुहलताको उमेरमा गरिने सेक्समा उसले सबैभन्दा धेरै सन्तुष्टी पाउँछ होला भन्ने आमधारणा छ । तर यो धारणा सही भने होइन । पछिल्लोपटक गरिएको एक […]
प्रेम, विवाह र सम्बन्ध एक अर्काका परिपूरक हुन् । विवाह भइसकेपछि सम्बन्धमा प्रेम अत्यावश्यक कुरा हो । प्रेम वास्तवमा दुई हृदयको मिलन हो । आफ्नो जोडीको चित्त नदुखोस्, कुनै शारीरिक वा मानसिक समस्या नपरुन्, कष्ट नहोस्, आफ्नो जे भएपनि उनको राम्रो होस् भन्ने चाहाना हुन्छ । जब एक अर्काप्रति भरपूर प्रेम र आदर हुन्छ तब […]
थाहा पाउनुहोस्, पोर्न भिडियो हेर्दाका बेफाइदाहरु
यदि तपाईलाई पोर्न हेर्न निकै मनलाग्छ र यसका लागि आफ्ना महत्वपूर्ण काम पनि छोड्नुहुन्छ भने तपाईको लागि नराम्रो खबर छ । सोधका अनुसार जसलाई पोर्न हेर्न मनपर्छ उनीहरुको जीवनबाट बिस्तारै रोमान्स कम हुने गर्दछ । उनीहरुलाई डेटमा जान मनपर्दैन किनभने उनीहरुलाई यसको आवश्यकता नै छैन जस्तो लाग्न थाल्छ । अनुसन्धानका अनुसार स्थिती त्यतिबेला खराब हुनसक्छ […]
सेक्सको क्रममा यदि तपाईको पार्टनर उफ, आह या आउच जस्ता आवज निकाल्छ भन्दैमा तपाईले यो सोच्नु भएन कि, उनले चरम सन्तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन् । पार्टनरले सेक्सको आनन्द लिइरहेको भनेर भ्रममा पर्नु व्यर्थ हुन्छ । किनभने यो देखावटी मात्र पनि हुनसक्छ । ब्रिटेनका शोधकर्ताहरुले एक सोधमा ‘२५ प्रतिशत महिला सेक्सका क्रममा आवाज निकालेर चरम आनन्द […]
जानिराखौं, नाभिका बारेमा केहि रोचक तथ्यहरु
नाभि अर्थात नाइटो हाम्रो शरिरको एक अंग हो । पेटको विच भागमा हुने नाभि मानिसहरुमा फरक फरक हुन सक्छ । यसका बारेमा विश्वमा धेरै कुराहरु उठेको पाइन्छ । नाभिका बारेमा रोचक तथ्यहरु नाइटो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा गन्धयुक्त भाग हो । यसका ६७ प्रकारका जिवाणुहरु पाइन्छन् । विश्वमा ४ प्रतिशत मानिसहरुको नाइटो बाहिर निस्किएको हुन्छ । […]